TTSweet: ရှမ်းဟင်းထုတ် မွှေးမွှေးလေး ...
Posted by T T Sweet at 12:58 PM
Labels: (၁ ၀၀) မြန်မာ အစားအသောက်များ ***, (၁-၂၀) ရှမ်းဟင်းထုတ်
ငွေစန္ဒာ November 21, 2010 at 1:22 PM
စန္ဒကူး November 21, 2010 at 2:38 PM
ဟင်းထုပ်အရမ်းကြိုက်တယ်.. မလုပ်တတ်လို့ငြိမ်နေတာ..း)
တီဆွိအသေးစိတ်ရေးပြ ပုံပြထားတော့ အတော်ဘဲ..
ရွှေရတုမှတ်တမ်း November 21, 2010 at 2:41 PM
အောင်မလေး...အဲလောက် ငရုပ်သီးတွေနဲ့ဆို ထွက်ပြီးရင် ရေချိုးတဲ့ ဘေစင် ထဲ တနာရီလောက် ဖင်စိမ်နေရလိမ့်မယ်
အမတို့လွိုင်ကော်မှာနေတုန်းက ဟင်းထုပ်နာမည်ကြီးဆိုင်တဆိုင်ရှိတယ်။ အသားမပါပဲကိုကောင်းတယ်။ တချို့တွေက မျှစ်လဲ ထည့်တယ်။ အသားနဲ့ပေါင်းရင်လဲ ၀က်သားနဲ့ ပေါင်းရင်ကြိုက်တယ်။ တခါမှတော့ လုပ်မစားဖူးဘူး။ ဒီမှာလဲ သူများလာပို့တာပဲ စားနေတာ။(ကြိုက်တယ် ကြိုက်တယ် ပြောထားတော့ လာပို့ရတာပဲပေါ့လေ) :P
အိမ်မှာ အမေကတော.ဝက်သားသုံးထပ်သားထည်.ပြီးလုပ်တယ်.. အသားသေးသေးလေးတွေတုံးပြီး ထည်.တာပေါ.နော်.. ခနောမှုန်.တော.မထည်.ဘူး.. ငှက်ပျောဖက်က မီးမကင်လဲ ရေနွေးထဲထည်.ပြုတ်လဲရပါတယ်.. ဂျူးမြစ်ရှိရင် အဲဒါလေးကိုက်စားလိုက်တာပေါ.နော်
Anonymous November 21, 2010 at 5:41 PM
ဟင်းထုပ်အရမ်းကြိုက်တယ်...၀က်သားနဲ့မှပိုကြိုက်တယ်...ဆိုင်ကတော့ တော်ရုံပဲ အသားထည့်တာပေါ့နော်..ကိုယ့်ဟာကိုယ်လုပ်မှ စိတ်ကြိုက်ထည့်ရတာ...ဆိုင်တွေမှာ ငါးထမင်း၊ ၀က်သားချဉ်နဲ့ဟင်းထုပ် တူတူတွဲရောင်းကြတယ်...စူးနွယ်လည်း စစချင်းလုပ်ကြည့်တုန်းက ကြက်သွန်မြိတ်အများကြီးထည့်ပေမယ့် ဆီမပါတော့ မာနေတာ...အမေ့ကိုပြန်မေးမှ ဆီထည့်ရတယ်ဆိုတာသိတာ...ဂျူးမြစ်ရှိရင်တွဲစားလေ့ရှိကြတယ်..စလုံးက ဗမာစားစရာတွေရှာရတာတော်တော်အဆင်ပြေတာပဲနော်
Evy November 21, 2010 at 6:42 PM
ဟင်းထုတ် အရမ်းကြိုက်တယ် တီဆွိရေ။ ကြည့်ရင်းနဲ့တောင်စားချင်လာပြီ။
Sunny November 21, 2010 at 7:33 PM
ဟင်.. တီဆွိရေ.. နာမည်ကြည့်တာနဲ့ကို စားချင်လာပြီ.. နောက်ကျ လုပ်စားဦးမယ်.. အခုတော့ တီဆွိဆီက ၂ထုပ်လောက် ယူသွားမယ်နော်.. :)
Anonymous November 21, 2010 at 7:57 PM
လပြည့်နေ့ မှာ ၀ါးကြောပဲ တီတီဆွဲ ခုနှစ်ထုပ်ဆိုတော့ သုံးထုပ်လောက်တော့ယူသွားဦးမယ် ဟဲဟဲ
TZA November 21, 2010 at 10:00 PM
အာယိုယို.. ကျနော်သိပ်ကြိုက်တာဗျာ၊ ငယ်ငယ်တုန်းက ဝက်သားနဲ့လုပ်တာမျိုး မကြာမကြာ စားဖြစ်တယ်။
Shinlay November 21, 2010 at 11:15 PM
အိမ်မှာ ငှက်ပြောဖက်ရှိနေတယ်။ ကြက်သွန်မိတ်ဝယ်ပြီးလုပ်စားပါမယ်။
khin oo may November 22, 2010 at 2:12 AM
rose November 22, 2010 at 4:18 AM
တီဆွီရေ...ရှမ်းပာင်းထုတ် တခါမှ မစားဖူးလို့ မြည်းကြည့်သွားတယ်နော်။ အဆာဗါလာက ဘာမှ ထွေထွေထူးထူး မပာုတ်ဘူးနော်။ ဆန်မှုန့်နဲ့ ကြက်သွန်မြိတ်အဓိကပေါ့နော်။ ဒီမှာတော့ ငှက်ပျော်ဖက် မရှိလို့ လုပ်စားလို့ ရမယ် မထင်ဘူး တီဆွိ။
ဆောင်း November 22, 2010 at 1:43 PM
ရေအချိန်ဆလေး ပြောပါအုန်း မဆွီရေ
T T Sweet November 22, 2010 at 3:30 PM
ရေက အဲဒီတုံးက မှတ်ထားတာ မေ့သွားလို့ ထည့်မရေးထားတာ။ ခုအစ်မကိုပြန်မေးကြည့်တော့ ဆန်မှုန့် အချိုး ရေ က ၄း၁ ပါတဲ့။ ဆန်ငါးခွက်ဆို ရေ တစ်ခွက် နဲ့ ၄ပုံတစ်ပုံပေါ့။
အကြမ်းဖျင်းပြောရရင် မုန့်သားက မုန့်လုံးရေပေါ်တို့ဘာတို့ လုံးသလောက်ထက် နဲနဲပျော့တယ်။ ဆီထည့်တော့ ပိုလို့တောင် ပျော့သွားသေးတယ်။ ပျော့တော့ဖက်ထဲထည့်ထုတ်တဲ့အခါ တော်တော်ထိမ်းထည့်ရတယ်။ ဒါမှလဲ မုန့်ကအိတာ။ ရေနည်းရင် မာတယ်တဲ့ ဆောင်းရေ။
အပေါ်မှာ ရေအချိုး ပြန်ထည့်ထားပါတယ်။
T T Sweet November 22, 2010 at 3:39 PM
လာလည်ပြီး မုန့်လာငန်း အဲ လာအားပေးတဲ့ သူများအားလုံး၊ မန့်သွားသောသူများအားလုံး ကျေးဇူးပါနော်။
ကိုယ်ကသာ ခုမှ စ စားဖုးတာ၊ ဟင်းထုတ်ကို တော်တော်များများ စားဖူးကြ၊ ကြိုက်ကြတဲ့သူတွေချည်းပါပဲလား။
အစ်မကြီးကွန်းရဲ့ ကွန်းမန့်ကိုဖတ်ပြီး ရယ်လိုက်ရတာ။ အဆင့်မြင့်တယ်ဆိုလို့။။
့််Home Sweet Home November 22, 2010 at 3:58 PM
T T Sweet November 22, 2010 at 11:20 PM
NTUC မှာရော၊ ကုန်ခြောက်ဆိုင်တွေမှာရော rice flour ဆို မေးဝယ်ရင်ရပါတယ်။ ပုံပါကြည့်ချင်ရင် အောက်ကလင့်ခ်ကို ကလစ်ကြည့်ပါနော်။
Unknown November 24, 2010 at 1:34 AM
မဆွိရေ.. အရှူပ်တွေလုပ်ပြီး နောက်ကျသွားလို့ ဟင်းထုတ်လေးရော ကျန်သေးရဲ့လားဟင် :))
တိုကျိုမှာ မြန်မာဆိုင်ကို သွားတုန်းက ရှမ်းဆိုင်မှာ ၀ယ်စားဖူးတယ်။ သူက ၀က်သားလေးပါ ထည့်ထားတယ်ထင်တယ်။ စားကောင်းလိုက်တာ တအား။ ထပ်စားချင်နေတာ
အခုဆို အတော်ပဲ၊ မဆွိကျေးဇူးနဲ့ လုပ်နည်းသိသွားပြီ။ ဒါပေမယ့် အခုနေရာမှာ ဌက်ပျောရွက်မရှိဘူး..။ တခြားဘာရွက်နဲ့ ပေါင်းရင်ရသေးလဲဟင် အစ်မ..
Anonymous November 24, 2010 at 5:44 PM
အခုဆို အတော်ပ တစ်ရက်တော့လုပ်စားအုံးမယ်။
ဝက်ဝံလေး November 24, 2010 at 10:16 PM
မာမီကွန် ပြောတာ သဘောကျလယ် ဟားဟားးးးး ဟုတ်လယ် ဒေါ်ဆွီတီ ကျုပ်လဲ အလုပ်တတ်ဘူး အဲဒါက ခက်တယ် ဗျ ဒါပေမယ့် လုပ်ပေးမယ့်လူရှိရင်တော့ စားချင်သားဗျား ဟားဟားးးးးးးးး တခါမှ မစားဖူးသေးဘူးဗျ ရှလွတ် ဂလု ပလပ်
အဘောက်ကျ ပြောတာ ရယ်ရတယ် ခွီးးးး
ဖိုးတုတ် November 24, 2010 at 10:36 PM
အပေါ်က ဘလော့ဂါအမကြီးတစ်ယောက်ပြောသွားတာ အမှန်ပဲ ရှမ်းဟင်းထုတ်လုပ်နည်းက ခက်တယ်ဗျို. စားတော့ စားချင်စရာကြီး
အုန်းထမင်းချက်တာတောင် အချိုးမကျလို. လောလောဆယ်ချက်တာတွေ ခဏရပ်ထားရပါတယ် ၊
မယ့်ကိုး November 24, 2010 at 10:38 PM
တစ်ခါမှ မစားဖူးဘူး။ ဒါပေမယ့် မမစာရေးရင် စိတ်ရွှင်ပြီး ဆွဲဆောင်နိုင်လွန်းလို့ ဘာဖြစ်ဖြစ် သဘောကျနေမိတယ် ;)
သက်ဝေ November 25, 2010 at 1:26 PM
လူဇိုး... ခဲရာ ခဲဆစ်တွေ လာချက်ပြနေတယ်...
(မစားရတော့ ရန်စကားပဲ ပြောသွားတယ်...
ငှက်ပျောရွက် မြင်ရင် မုန့်ဖက်ထုပ်ပဲ စားချင်တယ်...)
Raymond.Kyaw Minn Naing November 29, 2010 at 2:18 PM
ဟုတ်တယ် လွယ်ကော်ကဟင်းထုပ်ဆိုင် တော်တော်ကောင်းတယ်။ ကျွန်တော့်အမေအရမ်းကြိုက်ပဲ။